HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 26-NOV-2020
Thursday November 26, 2020 - 10:54:04 in Wararka by Mogadishu Times
Wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dib adda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cab dirisaaq Maxamed Abuukar ayaa Shalay loo dhaariyay xilka wasiirnimo ee dhawaan loo mag acaabay.
Munaasabadda dhaarinta oo ka dhacday M/ Muqdisho ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gud doomiyaha golaha shacabka baarlamaanka So omaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan iyo ku xigeenkiisa koowaad C/weli Sheekh Ibraahim Muu dey.
Md.Cabdirizaq Maxamed Abu bakar ayaa xilkan loo magacaabay kadib markii R/Wasaare Rooble uu xilka ka qaaday Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Axmed Ciise Cawad.
La wareegida xilka Wasiirka arrimaha dibadda ayaa ku soo beegmaysa xilli ay DFS mowqifk eeda ku aaddan siyaasada dalka Ethiopia uu ka dhashay muran sababay in xilka laga qaado wasiirkii hore ee arrimaha dibadda.
Md.Cabdirizaq Maxamed Abubakar ayaa xil kan loo magacaabay kadib markii R/Wasaare Rooble uu xilka ka qaaday Wasiirkii hore ee Arri maha Dibadda Axmed Ciise Cawad.
La wareegida xilka Wasiirka arrimaha diba dda ayaa ku soo beegmaysa xilli ay DFS mow qifkeeda ku aaddan siyaasada dalka Ethiopia uu ka dhashay muran sababay in xilka laga qaa do wasiirkii hore ee arrimaha dibadda.
RW Rooble oo sheegay inuu la fariisan doo no musharraxiinta cabashada ka qaba Guddi ga Doorashooyinka.
R/Wasaaraha XFS Md.Maxamed Xuseen Ro oble oo ka hadlayay xaflad sagootin aheyd oo Habeen hore loogu qabtay magaalada Baydh abo ayaa soo hadal qaaday Guddiyada door ashooyinka ee ay ka cabanayaan musharixiinta u tartameysa xilka Madaxweynaha Soomaaliya doorashada 2020-2021.
R/Wasaare Rooble ayaa sheegay in Maga caabista Guddiyada doorasho oyin ka ay qeyb ka aheyd h eshiisyadii doorasho ee ka kala dhacay Dhuu samareeb iyo M/Muqdisho waxa uu na intaas ku daray inuu diyaar u yahay in uu la fari isto musharaxiinta saluugsan habka loo mag acaabay guddiyadaas.
"Waxaa jira Musharaxiin walaac ka muujiyay guddiyadaas la soo magacaabay, waxaan ra baa inaan musharaxiintaas kala fariisto ugana dhaadhiciyo sida guddiyada la soo magacaabay ay u yihiin wax macno leh oo wadanka ka gudb inaya doorashada una gudbinaya dowladdii wadankaan maamuli laheyd afarta sano ee soo socda” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Rooble.
Hadalka R/W/ Rooble ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli weli musharixiinta Madaxweynaha ay diidan yihiin Gudiyada doorashooyinka, sidoo kalena Shalay la filaayo inay go’aano kasoo saa raan shirka uga socdo M/Muqdisho.
Daahir Geelle: Waxaan isku dayeynaa inaan Farmaajo bad-baadino si uu nabad ugu noolaado Xamar
Wasiirkii hore ee warfaafinta Daahir Maxam uud Geelle oo haatan ah musharax madaxwey ne,isla markaana ka mid ah midowga musharax iinta ee shirku Muqdisho uga socdo ayaa sheegay in waxa ay ka shirayaan ay ka mid tah ay maslaxadda madaxweyne Farmaajo.
Waxa uu sheegay in kali-talisnima du markii laga soo tago dadka kale ay u darantahay qofka markaas xilka ha ya, isla markaana uu Farmaajo hadda u baah anyahay in lagala taliyo kaligi talisnimada.
"Naga rumeysta waxa aan u taaganahay wa xaa ka mid ah, maslaxadda madaxweynaha xil ka haya, kali-talisnimadu inteysan khatar ku no qon muwaadiniinta iyo siyaasiyiinta kale, waxay khatar ku tahay qofka markaas xilka haya,” ay uu yiri Daahir Maxamuud Geelle.
Sidoo kale waxa uu sheegay in hadii xuk unku halaabo ay is aaminidu yaraaneyso wax kastana halaabayaan.
"Anagu hadda makarafoon ayaan wax ku sheegeynaa, holl kan oo kale ah ayaan wax ka soo abaabuleynaa, laakiin xeryaha iyo qoryaha in wax lagu abaabulo ayey isku bedeleysaa, ta as ayaan ka hor taaganahay Farmaajo,” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Hay’adda FAO ee QM u qaabilsan Beeraha iyo cunada ayaa sheegtay in ay iminka daciiftay oo ay tabar dareysay duufaanta GATI ee xeeba ha bari ee Soomaaliya ku dhufatay 22 bishaan November.
Duufaanta ayaa xawaarahee du yaraaday 12-saac ee la soo dhaafay, iyada oo dhanka waq ooyi galbeed u jiheysatay.
Warbixinta ay hay’adda FAO soo saartay ay aaa lagu sheegay in roobab xoogleh oo la xir iira duufaanka ay da’i doona illaa 26 November 2020.
Saameynta duufaanta ay deegaanka u gey satay ayaa weli jirta sida FAO tilShalayy.
Dhanka Somaliland waxay sheegtay in bad du weli kacsan tahay, isla markaana aan la isku haleyn karin in laga kalluumeysto.
Sidoo kale dhanka Somaliland waxaa la saadaalinaya roobab dhex dhexaad ah sadaxda cisho ee soo socota ka da’i doono deegaann ada maamulkaas.
Puntland ma jiraan roobab la faliyo in ay hooraan sida warbixinta lagu sheegay.
Musharixiinta oo sheegay inay fashil antay Dowladda Madaxweyne Farmaajo
Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Maalintii Shanaad oo xiriir ah waxaa ay kul an ku yeesheen Magaalada Muqdisho, iyaga oo ka hadlayay Arrimaha doorashooyinka iyo wal aac ay ka qabaan Guddiyada doorashooyinka.
Shalay ayaa qorshuhu ahaa in Shirka la soo geba-gabeeyo, hayeeshee waqti dheeraad ah ayaa lagu daray sababo la xiriira wadatashiyada ay musharixiinta la yeelnayaan qeybaha kala du wan ee Bulshada iyo dadka saameynta leh oo weli socda. Afhayeenka Midowga Musharixiinta Mada xweynaha Ridwaan Xersi Maxamed ayaa shee gay in musharixiinta ay aad uga doodeen, halka dalka uu ku socdo halka uu ka yimid iyo sida laga yeelayo.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Maalmihii uu Shirka socday ay isla eegeen waxyaabo bad an oo uu sheegay inay ku fashilantay Dowladda Madaxweyne Farmaajo, sida wax ka qabashada Ammaanka, Dhaqaalaha, Dastuurka dalka, iyo maqaamka Muqdisho. Ugu dambeyn Afhayeen ka Midowga Musharixii nta Madaxweynaha Rid waan Xersi Maxamed wax aa uu sheegay in wa xyaabihii ay ka hadlayeen maalmihii la soo dha afay iyo Go’ aankooda ay ku sheegi doonaan Warmurtiyeed ka ay Maanta soo saari doonaan.
Xog: Deni iyo A.Madoobe oo aqbalay codsi gii ka yimid musharaxiinta ku shirsan Xamar
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa ogolaaday codsigii ka yimid musharaxiinta madaxweynaha ee ku shirsan Muqdisho, ee ah aa inay wax ka bedelaan xubnaha guddiyada do orasho ee heer federal ay soo magacaabeen, si da ay ogaatay Caasimada Onli ne. Musharaxiin ta ayaa qoraal ay soo saareen 22-kii bishan uga co dsaday Axmed Madoobe iyo Sac iid Deni inay dib u eegis ku same eyaan, oo ay soo bedelaan xubnaha ka tirsan shaqaalaha ra yidka ah ee ku jira labada guddi, midka doora shada iyo midka xalinta khilaafaad ka.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caa simada Online u xaqiijiyey in Axmed Madoobe iyo Deni ay aqbaleen codsigaas, diyaarna u yih iin in shaqaalaha rayidka ay ka saaraan xubn aha ay soo magacaabeen.
Afarta xubnood ee midkiiba ay soo magic aabeen Puntland iyo Jubaland ayaa waxaa ku ji ra xubno xilal ka haya maamulladaas, sida aga asime ku-xigeenka madaxtooyada Puntland iyo hanti-dhowrka guud ee Jubaland.
Caasimada Online ayaa ogaatay in codsigii loo diray Jubaland iyo Puntland uu kusoo bixi doo no war-murtiyeedka shirka Muqdisho, ayada oo diri doono dhammaam maamullada iyo DFS.
Puntland iyo Jubaland ayaa kadib qaadi doo no tallaabo ay ku saaraayaan shaqaalaha ray idka, si ay tusaale ugu noqdaan maamul gobol eedyada kale, islamarkaana cadaadis u saa raan dowladda dhexe.
Xubnaha Puntland iyo Jubaland ay soo mag icaabeen ayaan weli soo gaarin magaalada Mu qdisho, waxaana la rumeysan yahay in labadan maamul ay saluugsan yihiin sida ay wax u wa ddo dowladda dhexe.
Waxay sidoo kale sidan u sameeyeen inay waqti siiyaan musharaxiinta, oo aan loo guda ge lin doorasho, taasi oo ah waxa ay raadineyso dowladda dhexe.Xigasho:-Caasimadda.Net
Wasaaradda caafimaadka XFS oo soo gabo-gabeysay shir looga hadlay qorshaha nafaqada ee 2021/2022
W/Caafimaadka &D/B/XFS, qeybteeda ma shruuca nafaqada ayaa soo gabogabeysay shir lagu lafa gurayay soo saarida qorshaha nafaqa da ee sanadka 2021/2022, kaas oo lagu qabtay M/Muqdisho.
Shirka oo leysla gartay sidii sare loogu qaadi lahaa ka wadashaqeynta nafaqada iyo in iskaa shi buuxa laga yeesho ayaa waxaa kasoo qeyb galay wasaaradaha caafimaadka dowlad gobol eedyada dalka. Gabogabadii shirka ayaa billad sharaf ay ku muteysteen kaalinta ay ka qaateen qorshaha nafaqada iyo sahminta nafaqeeyayaal ka yaryar (Micronutrient Survey-2019) W/ caafimaadka Puntland, Jubbaland, K/galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle.
Guddoomiyaha G/Banaadir Ahna Duqa Ca asimada Cumar Maxamuud Maxamed (Finish) ayaa Shalay oo Arbaca aheyd kulan la qaaa tay Safiirka M/Yurub u qaabils an Soomaaliya Amb. Nicolás Ber langa Martinez
2da Masuul ayaa waxaa ay kaw ada hadaleen Xalinta Maareynta Barakacayaasha iyo soo dedejinta shaqooyinka Midowga Yurub ka wado Soomaaliya.
Safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Soo maaliya Amb. Nicolás Berlanga Martinez ayaa sheegay in Midowga Yurub uu kordhinayo tag eerada uu siiyo dowladda Soomaaliya gaar aha an Maamulka Gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha G/Banaadir Md.Cumar Finish ayaa dhankiisa uga mahad celiyay Midowga Yurub taageerada ay siiyaan Soomaaliya.
Dowladda oo cambaareysay shan qof oo is ku qoys ahaa oo lagu dilay Waajid
Wasiirka Cadaaladda Somaliya, C/dir Max amed Nuur (Jaamac) ayaa si kulul u cambaare eyay 7dii qof ee Habeen hore lagu laayay Degm ada Waajid ee Gobolka Bakool.
Dadkan oo ay ku jiraan 3 Carruur iyo 2 Haw een ah ayaa waxaa la sheegay inay dileen rag hubeysan, ka dib markii ay u dhaceen hoygii ay deganaayeen.
Wasiirka Cadaaladda ayaa umadda Soomaa liyeed kaga tacsiyadeeyay ficilka guracan ee qo yskaasi lagu laayay, isagoona yiri "Waxaan gu ud ahaan umadda Soomaaliyeed uga tacsiyad eynayaa qoyskii Soomaaliyeed ee Habeen hore si wadar ah Al Shabaab ugu laayeen D/Waajid, iyagoo gurigooda jiifa.”
Wasiir Jaamac ayaa sheegay in ficilka cey nkaasi oo kala ah ay gaystaan waxa uu ugu yee ray damiir laawayaasha Al Shabaab.
"In hooyo uur leh iyo carruur la laayo keliya waxay ka suurowdaa damiir laawayaasha Al Shabaab. Waxaan qoyskii, qaraabadii iyo dham maan reer Waajid leeyahay samir iyo iimaan Ila ahey hanaga siiyo, iyagana qabrigooda Allaha u waasaciyo, Janatul Firdowsana ka waraabiyo.” Ayuu yiri Wasiir Jaamac.
Maamulka G/Bakool& kan D/Waajid ayaa sidoo kale waxa ay masuuliyadda weerarkaasi ku eedeeyeen Ururka Al Shabaab.
Md.Cali Nuur Cali (Cadhood) oo sheegay in uu yahay aabaha dhalay hooyadii qoyska ayaa sheegay in dadka la dilay ay isugu jiraan hooyo, aabe, 3 carruur ah oo ay dhalleen iyo 2 qof oo marti u ahayd, oo midi ay haweeney tahay.
Md.Cali Nuur Cali oo la hadlay BBC ayaa sheegay inaanu garanayn sababta dadkaasi loo laayay, balse uu u maleynayo in loo dilay uun aabbaha qoyska oo ka tirsanaa Ciidamada Dow ladda.
Dhacdadan ayaa dareen argagax leh ku be ertay dadka deegaanka, iyadoona noqotay mi dda loogu hadalhaynta badan yahay deegaana da Koonfur Galbeed
Xaaf: Xalaalba maaha shirka mushara xiinta mucaaradka
Madaxweynihii hore ee Galmudug, Md.Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warramay aragtidiisa ku aadan shirarka siyaasadeed ee magaalada Muqdisho uga so cdo musharraxiinta mucaaradka.
Madaxweynihii hore ee Galmudug ayaa sababta ku sheegay in madax da qaar ee shirka fadhiso aysan dal kan waxba u qaban, isaga oo si gaar ah ugu dhagay Xasan Cali Khayre.
"R/Wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khey re oo inta Ciidamo ii keen-saday xilkeygii iga soo ceersadey Dhuusamareeb ayaa ka mid ah shirka Muqdisho, maxow shir ka noqonayaa xa laalba maahane.” ayuu yiri Axmed Ducaale Gee lle (Xaaf).
Sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday tabash ada ay musharraxiintu ka muujinayaan guddiya da doorashooyinka, wuxuuna sheegay in kaliya ay wadaan mar-marsiiyo iyo inay carqaladeeya an doorashada soo socota, isaga oo hoosta ka xariiqay in la wada ogaa sidii ay ahaayeen gud diyadii uu sanadkii 2016-kii magacaabay Xasan Sheekh Maxamuud.
Si kastaba Muqdisho ayaa marti galineyso shirar siyaasadeed oo iska soo horjeedo, kuw aas oo looga hadlayo doorashada, gaar ahaan muranka ka taagan guddiyadeeda.
Ciidamada dowladda oo ku baxay degaan uu dagaal ka dhacay
Ciidamo ka tirsan kuwa Millateriga Soomaali ya gaar ahaan qeybaha 27aad & 21aad ayaa ku baxay degaanka Nagaarta oo hoostago D/Mat abaan ee G/Hiiraan, halkaas oo Dorraad ay ku dagaalameen laba maleeshiyo Beeleed.
Maleeshiyaadka dagaalamay ayaa isku hey sta dhul daaqsimeed degaanka asi ku yaalla, waxaana la shee gay in dagaalka uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimahso iyo dhaawac.
Taliyaha Guutada 5-aad qeybta 27-aad Korn eyl Maxamuud Xasan Ibraahim (Baakay) oo ho ggaaminaya ciidankaasi dhanka Gal-gaduud wa xaa iyane kayimid ciidamo ka tirsan qeybta 21-aad, waxaana uu sheegay inay kala dhex-geli doonaan maleeshiyaadka dagaalamay.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada dowladda ga ar ahaan qeybta 27aad ayaa waxaa ay sheeg een inay xaqiijin doonaan amniga degaanka la gu dagaalamay, si markale uusan u dhicin dag aalka u dhaxeeya labada maleesiyo beeleed.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaara ya degaanka Nagaarta oo hoostago D/Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in xaalada ay degan tahay, hayeeshee malee shiyaadkii dagaalamay ay weli ishor-fadhiyaan, kuwaas oo la filayo in la kala qaado.
Qarax Khasaare gaystay oo lala eegtay Ciida mada Haramcad
Wararka ka imaanaya duleedka M/Muqdisho ayaa sheegaya in miino la dhigay wadada dhina ceeda jidka u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye uu ku qarxay gaari ay leeyihiin ciidanka booliska Soomaaliya gaar ahaan kuwa gaarka ah ee Haramcad.
Ilo Wareedyo ayaa sheegaya in 3 Askari ay ku dhaawacmeen qaraxa isla markaana uu bur bur soo gaaray gaarigii ay ciidanku wateen.
Ciidankan ayaa maalin kasta roondo ka sam eeyaa waddada iyagoo ilaalo ka haya shaqaallaha shirkad Turki ah oo dhisaysa laam iga u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye.
Illaa hadda ma jirto cid sheegatay mas’uuli yadda qaraxan waxase aalaaba qaraxyada wa ddooyinka hareerahooda la dhigo ee lagu weera ro ciidamada dawladda sheegta ururka Al-Sha baab. Waddada isku xirta Muqdisho & Afgooye ayaa waxaa ka socda dhisme laami ah oo ay dhisayaan Injineero u dhashay dalka Turkiga.
Maleeshiyo is-hortaagtay safarkii Md.Cali Gu udlaawe ee Beledweyne iyo xiisad taagan
Waxaa mar kale Shalay dib u dhacay safar uu Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle Cali C/hi Xuseen (Guudlaawe) ku tagi lahaa M/Bele dweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Sababta baaqashada safarka madaxweyne Guudlaawe ee M/Beledweyne ayaa lagu sheeg ay kadib markii maleeshiyaad hubeysan oo ka soo horjeedo safarkiisa ay aad ugu soo dhawaa deen garoonka diyaaradaha ee magaaladaas.
Maleeshiyaadkan hubeysan, oo ku sugnaa deegaanka Ceelgaal ee duleedka M/Beledweyne, ayaa la sheegay inay Habeen hore usoo dhawadeen garoonka diyaaradaha Ugaas Khal iif ee magaladaasi.
Waxaa fashil kusoo dhamaaday wada-hadal u socday xubno ka tirsan Maamulka G/Hiiraan iyo maleeshiyada hubeysan ee kasoo horjeedo safarka uu madaxweyne Guudlaawe ku imaan lahaa magaalada.
Maleeshiyadaan hubeysan ayaa waxaa hog gaaminaya General Xuud oo ah sarkaal hore, islamarkaana kamid ahaa musharixiinta mada xweynaha maamulka HirShabelle.
Generalkaan ayaa la rumeysan inuu aad uga soo horjeedo isbadalkii lagu sameeyey awood qeybsigii Maamulka Hirshabelle kadib markii xilka madaxweynimo laga wareejiyey Beesha Xawaadle oo horey u heysay.
Waxaa socdo dadaalo dheeraad ah oo la do onayo in xiisadaan lagu damiyo, balse aad ayey u yar tahay rajada ah in Madaxweyne Guudla awe tago Magaalada Beledweyne sida ay noo xaqiijiyeen illo wareedyo ku sugan Magaalada.
QMidoobe oo sheegtay in qaxootiga Itoobiya ee gaaraya Sudan ay kordheen.
Hey’adda qaxootiga Q/Midoobe ee UNHCR ayaa sheegtay in dadka qaxootiga ee ka bax sanaya dagaalka la socda waqooyiga itoobiya ay soo kordhayaan.
UNHCR waxay tilShalayy in iminka 40,000 ay kor u dhaafeen dadka qaxo otiga ee gaaray bariga Sudan
2dii cisho ee ugu danbeysay waxaa xadka Su dan gaaray 5,000 oo qof kuwaas oo car uur iyo haween u badan .
UNHCR waxay sheegtay in 300 oo caruur ah kuwaas oo aad u nafaqo daran hada la quudiyo islamarkaana la siiyo daryeel caafimaad.
Qaxootiga waxaa la siiyaa cuno bisil waxaana loo sameeyay goobo biyo ay ka cabaan iyo musqulo .
UNHCR waxay sheegtay in ay ka shaqeyne yso sidii dadka qaxootiga xuduuda looga dhee reyn lahaa oo loo geyn lahaa gudaha Sudan.
Ilaa 8,000 oo qof ayaa hada la geeyay deegaan ka Um Rakuba oo 70km gudaha
Golaha Wakiillada Puntland oo uu shir-gudd oomiyey Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Pun tland Cabdirashid Yuusuf Jibril ayaa waxa ay Sh alay ansixiyeen Miisaaniyadda sanadka 2021.
Kulanka Shalay oo ahaa Fadhigii 16-aad ee Kalfadhiga 47-aad ayaa waxaa soo xaadiray 54 Mudane, iyaga oo dood adag ka yeeshay Miisa aniyadda Puntland, ka dib soo gudbinta warbixinta Guddiga Dhaqaalaha iyo Xisaabaadka sida uu qabo qodobka 64-aad, iyo 135-aad ee Dastuurka DPL, iyo qodobka 58-aad, 62.6-aad iyo 63-aad ee Xeer-hoosaadka Golaha Wakiillada Puntland.
Dooda Odoroska Miisaaniyadda sanadka 2021 ee Golaha la horkeenay waxay dhan tah ay $ 341,861,037 ( Saddex boqol afartan iyo kow malyan sideed boqol lixdan iyo kow kun iyo soddon iyo todoba dollar) sannadkii, halka ay bi shii noqonayso $ 28,488,420 ( Labaatan iyo sid eed malyan afar boqol sideetan iyo sideed kun afar boqol iyo labaatan doolar).
Dood ka dib, Xildhibaannada ayaa cod aqla biyad ah ku ansixiyey Miisaaniyadda sanadka 2021., waxaana guddoomiyaha Wakiillada Puntl and Cabdirashid Yuusuf Jibril uu fadhiga ka sheegay in ay ansax tahay miisaaniyadda 2021.
Lafta Gareen oo difaacay Guddigii doorash ada uu soo magacaabay, si kululna u weeraray…